Funda Yiyiphi Inxalenye Yehlabathi Ithetha isi-Mandarin Xhosa
IsiShayina isiTshayina sithetha ngabantu abangaphezu kwezigidi ezili-1, okwenza kube ulwimi olukhankanywe kakhulu kwihlabathi. Nangona kubonakala ukuba iMandarin isiTshayina ixutywe kakhulu kumazwe aseAsia, kunokumangalisa ukuba zininzi iinkonzo zaseTshayina ezihlala ngaphaya kwehlabathi. Ukuhamba ukusuka kwiindawo zaseUnited States ukuya eMzantsi Afrika ukuya eNicaragua, isiShayina saseMandarin sinokuvalelwa ezitalatweni.
Ulwimi olusemthethweni lwase-Mainland eChina naseTaiwan.
Nenye yeelwimi ezisemthethweni zaseSingapore kunye neZizwe eziManyeneyo.
Ubuninzi obubonakalayo e-Asia
I-Mandarin iphinde ithethe nakwiindawo ezininzi zaseTshayina emhlabeni wonke. Kuqikelelwa ukuba izigidi ezingama-40 zaseTshayina ezihlala phesheya kwezilwandle, ikakhulukazi kumazwe ase-Asia (malunga neeprayimenti ezingama-30). Iindawo apho i-Mandarin isiChina ifumaneke khona kodwa akukho ulwimi olusemthethweni luquka i-Indonesia, i-Vietnam ye-Vietnam kunye neMalaysia.
Ubuninzi obubonakalayo ngaphandle kwe-Asia
Kukho abantu baseTshayina abahlala kwiiMelika (ezizigidi ezi-6), iYurophu (izigidi ezi-2), i-Oceania (1 million) kunye ne-Afrika (100,000).
E-United States, iiChinatown kwisiXeko saseNew York naseSan Francisco ziqulethe iindawo ezinkulu zaseTshayina. AmaChinatown eLos Angeles, eSan Jose, eChicago, naseHongolulu nayo inexinankulu enkulu yabantu baseTshayina kwaye ngoko bathetha isiTshayina. ECanada, ubuninzi baseTshayina bahlala kwiiChinatown eVancouver naseToronto.
EYurophu, i-UK inamaninzi amakhulu aseKinatown eLondon, eManchester naseLiverpool. Enyanisweni, iChinatown yaseLiverpool yiyona indala kwiYurophu.
E-Afrika, iKinatown yaseGoli yinto ethandwa ngabantu abathenkethi ngamashumi eminyaka. Ezinye iindawo zasekuhlaleni zaseTshayina zasemaphandleni zikhona naseNigeria, eMauritius naseMadagascar.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba uluntu lwaseTshayina olungaphandle lwaso aludingi ukuba isiShayina saseMandarin sithetha ulwimi oluqhelekileyo kuluntu. Ngenxa yokuba isiMandarin isiTshayina ngolwimi olusemthethweni nolwimi lwesiNgesi sase-Mainland yaseChina, unako ukufumana ngokuthetha isi-Mandarin. Kodwa iChina nayo ibuyele kwikhaya elingabonakaliyo. Amaxesha amaninzi, ulwimi lwendawo lusetyenziswa ngokubanzi kwiindawo zaseChinatown. Ngokomzekelo, isiCanton sisetyenziswe ngakumbi isiTshayina esithetha kwiChinaatown yaseNew York City. Ngoku kutshanje, ukugeleza kokufudukela kwiphondo laseFujian kuye kwabangela ukwanda kwintetho zesincoko.
Ezinye iilwimi zaseTshayina ngaphakathi kweChina
Nangona lube ulwimi olusemthethweni lwaseChina, isiXhosa saseMandarin asilo ulwimi oluphela luthethwa khona. Uninzi lwabantu baseTshayina bafunda isi-Mandarin esikolweni, kodwa bangasebenzisa ulwimi okanye ulwimi oluthile ngolwazi lwemihla ngemihla ekhaya. I-Mandarin isiShayina sisetyenziswe kakhulu ngasentla nasentshonalanga yeChina. Kodwa ulwimi oluqhelekileyo eHong Kong naseMacau luyiCanton.
Ngokufanayo, isiMandarin asilo ulwimi olulodwa lwaseTaiwan. Kwakhona, abantu abaninzi baseTaiwan bangathetha kwaye baqonde isiShayina isiTshayina, kodwa banokukhululeka ngezinye iilwimi ezifana neTaiwanese okanye i-Hakka.
Liliphi Ielwimi Ndimele Ndilifunde?
Ukufunda ulwimi oluthethwa kakhulu emhlabeni luza kuvula amathuba amatsha amashishini, ukuhamba kunye nenkcubeko. Kodwa ukuba uceba ukutyelela ummandla othile waseTshayina okanye iTaiwan unokuba ngcono ukuba ukwazi ulwimi loluntu.
I-Mandarin iya kukuvumela ukuba uqhagamshelane nabani na baseChina okanye eTaiwan. Kodwa ukuba uceba ukugxininisa imisebenzi yakho kwiPhondo laseTu Guangdong okanye eHong Kong ungayifumana isiCanton ukuba ibe luncedo ngakumbi. Ngokufanayo, ukuba uceba ukwenza ishishini kwinqanaba laseTaiwan, unokufumana ukuba iTaiwanese ibhetele ekusekeni ishishini kunye noluntu.
Ukuba, nangona kunjalo, imisebenzi yakho ithatha kuyo imihlaba eyahlukeneyo yaseChina, iMandarin yinto ekhethekileyo. Ngokwenene i- lingua franca yehlabathi lesiTshayina.
Ukusebenzisa 'Hayi' kunye namazwi ahlobene ngesiSpanish
Indlela yokuxelela ixesha kwiItaliyane
Ukufunda isiShayina yendabuko ngesichazamazwi se-MoE
Amazwi amaninzi ama-50 aqhelekileyo asetyenziswayo kwiilwimi zesiNgesi
Izingane zaseJapan IiNgoma - i-Donguri Korokoro
Inkcazo kunye nokusetyenziswa kweMüllerian Mimicry